Ministry of Labor and Social Affairs – Somali Government – Wasiirka Shaqada oo guddi u saaray inay ka soo talo bixiyaan qoraalka siyaasadda Shaqo u Abuurka Soomaaliya. (National policy employment for Somalia )
Wasiirka wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xildhibaan Saalax Axmed Jaamac ayaa shir guddoomiyay kulanka guddi hore loogu saaray inay ka soo talo bixiyaan qoraalka siyaasadda Shaqaalaynta qaranka kaasoo looga hadlayay arrimo dhowr ah oo la xiriira Shaqo u Abuurka Soomaaliya.
Guddigan ayaa waxaa loo sameeyey in xiriir joogto ah ay la yeeshaan hay’adaha kala duwan ee dawladda ee ka shaqeeya arrimaha shaqo Abuurka.
Kulanka ayaa ka soo qeyb galeen Xoghayan joogtada, Agaasimaha Guud, Agaasimayaasha Waaxyaha iyo Lataliyeyaasha wasaaradda, waxaana dood dheer laga yeeshay qodobadii looga hadlayay.
Lataliyaha Dhanka farsamada Mudan Cabdi Issakh ayaa faah faahin ka bixiyey qaabka ugu haboon ee loo meel marin karo siyaasadda Shaqaalaynta qaranka (NEP) waxuuna tilmaamay muhiimadda ay leeyihiin qodobada qaarkood in aad looga taxadiro si loo waafajiyo shuruucda dalka gaar ahnaa sharciga shaqaalaha rayidka Soomaaliyeed .
Sidoo kale wuxuu soo jeedintiis ku sheegay caqabadaha jiro inee ugu horeeso xog la’aanta suuqa shaqda, dhamaan siyaasadaha hey’adaha oo aan mideesneen iyo sidii leesu keenilahaa hey’adaha ku howlan shaqo abuurka dalka.
Ugu danbeyn, wasiirka shaqada iyo arimaha bulshadda ayaa kula dar-daarmay guddiga in la sameeyo qorshe cad oo loo marayo arrimaha siyaasadda Shaqaalaynta qaranka , isla markaana cid waliba ay quseyso arrintani lala fariisto si qodobada ka soo baxaya shirarka u noqdaan kuwa leh aragti fog oo lugu hormarinayo siyaasadda Shaqaalaynta qaranka. (Developing national employment policy for Somalia)
“waxan doonayaa in la dhamaystiro qoraalka siyaasadaha shaqada ee qaranka. Bishan Oktoobar 2017 dhamaadkeeda si aan ugu gudbiyo golaha Wasiirada, sharaxaadna ka bixiyo wejiyada kala duwan ee horumarinta (NEP)” ayuu yiri wasiir Saalax Ahmed Jaamac.
Kulanka ayaa ku soo dhamaaday in lagu dheeraado ka hadalka muhiimadda uu dalkeena u leeyahay guddigan ka shaqeynaya siyaasadda Shaqaalaynta qaranka Soomaaliyeed.